Ukuphupha itawuli Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Itawuli yingubo ebalulekileyo kwimpahla. Isetyenziselwa ukomisa izandla, umzimba okanye izitya emva kokuhlamba. Kwizinwele zomlungisi weenwele ohlikiweyo ngetawuli. Iitawuli ezifudumeleyo zethayile ziyaluthambisa ulusu kwaye zinendawo esisigxina kumagumbi ethu okuhlambela, kodwa zinokuthathwa njengetawuli yokuhlamba echibini, elunxwemeni okanye kwi-sauna. Kuba iintsholongwane zinokuhlala ngokulula kwilaphu elimanzi letawuli, iitawuli zamaphepha zisetyenziswa kwiindawo zikawonkewonke, zilahlwe emva kokusetyenziswa.
"Ndiyanikezela" Libinzana elalivela kwimbethi manqindi kwaye ngoku lisetyenziswa njengesixhobo sokunikezela.
Ukuba umntu uphupha ngelaphu elinjalo, unokuziva isidingo sokomisa. Mhlawumbi waqubha ephupheni okanye wahlamba izandla. Ekuchazeni amaphupha, itawuli inamandla okomfuziselo okhethekileyo. Kufuneka kuqatshelwe iimeko ezichanekileyo zomsitho wephupha, kunye nohlobo lwesimboli yephupha.
1 Uphawu lwephupha «itawuli»: awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Ndinxibe nje itawuli ... ukuba ube ze ephupheni!
2 Uphawu lwephupha «itawuli» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «itawuli» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «itawuli» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «itawuli»: awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Ndinxibe nje itawuli ... ukuba ube ze ephupheni!
Xa iphupha lihamba phantse lize ze ephupheni linxibe itawuli kuphela, uziva njengemeko eneentloni kwaye unoluvo lokuba onke amehlo ajonge kuye. Nangona kunjalo, ekutolikweni kwephupha, iphupha elinjalo libonisa ukuba umntu ekubhekiswa kuye ngasese unqwenela abanye ukuba babone okuthile ngaye. Ufuna ukubonisa into yakhe okanye angazifihli. Ihlala ingonwabisi.
Ukuba ilaphu elibonwe ephupheni lincinci kakhulu ukuba lingagubungela ngokwaneleyo amalungu esini kunye nempundu, iphupha elihlala livelisa iintloni. Usondela ekutyhilekeni kwemfihlo yakhe ngamanyathelo anyukayo.
Uphawu lwephupha «itawuli» - ukutolikwa ngokubanzi
Isimboli yamaphupha "itawuli" kukuchazwa kwamaphupha luphawu lokubuka iindwendwe nothando. Ukuba uphupha itawuli ngokunxulumene nomtshato, ibandakanya ukusondelelana. unxibelelwano.
Ukuba omabini amaqabane acoca izandla ngaxeshanye, iphupha lazisa ngengxabano. Ukuba isimboli yephupha itawuli emdaka, oko kuthetha Izifo o Iingxaki ngaphakathi kusapho. Ukuba isiqwenga sengubo simhlophe kwaye sicocekile, ekuchazeni amaphupha oko kuthetha ukubuyela kwimeko yokugula, kunye nemfuno yokucoca into ethile.
Ngokubanzi, uphawu lwephupha «itawuli», ukuba womile ephupheni kunye naye kwigumbi lokuhlambela, umzekelo, libonisa ukungcolisa okuchaphazela ngokuthe ngqo iphupha. Ukuba uzisula ephupheni ngetawuli ebusweni bakho, isiganeko esingalindelekanga saziswa kumqondiso wephupha, oya kukukholisa iphupha.
Ukuba itawuli ijinga ukuba yome, oku kubonakala kutoliko lephupha. ukukhululwa wento engathandekiyo. Itawuli eyenziwe ngelinen inokubonwa njengephupha ukubonisa ixesha lokuchuma kunye nolonwabo.
Uphawu lwephupha «itawuli» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwephupha, itawuli luphawu lokuba iphupha linesidingo sokulungisa into kunye nayo. Cwepa ukwala. Itawuli iyimfuneko kuba ulusu olumanzi luthathwa njengolungonwabisiyo.
Kutoliko oludumileyo lwamaphupha, oku kuthetha ukuba ngokuphupha ungathanda ukucima iminyhadala enzima emphefumlweni wakho. Unokwazi nokuba nezandla zakho kwangaphambili "Wahlamba ngobumsulwa". I-subconscious izama ukuzikhulula ephupheni ngeemvakalelo zetyala eligubungela isazela. Isimboli yephupha icacisa lo mnqweno xa uphupha kwaye kwangaxeshanye ibonisa ukuba uxolo olunyanisekileyo luya kufaneleka ngakumbi.
Enye into kukutolikwa kwamaphupha. ukurhoxa. Ngokomfuziselo "uphosa itawuli" ephupheni kuba ukholelwa ukuba awusenakuphumelela kumlo ongenathemba.
Kwelinye icala, uphawu lwephupha lunokuba siselfowni yokungakwazi ukuluma enye into engenathemba lokuphumelela. Kwelinye icala, itawuli inokulumkisa umphuphi ukuba anganikezeli ngokukhawuleza.
Uphawu lwephupha «itawuli» - ukutolika kokomoya
Itawuli ikukuchazwa kwamaphupha njengomfuziselo wephupha, isimemo sephupha lokujongana ne iimvakalelo zethu ukuqhubela phambili ukukhula. Kungoko kuphela apho uqhubela phambili kwinqanaba lokomoya.
Isimboli yephupha ikwabonisa ukugqitywa kwesigaba apho utshintsho lwenqanaba elitsha lobomi luqala khona.